Egosipụta, Ntughari-ugbu a Ambient Glow! | Martech Zone
After scrapping my old theme, ndabara Kubrick isiokwu malitere itolite m… ọ dị ọcha ma dị mfe. Mgbe m nwusịrị iwe banyere isiokwu ikpeazụ m (a na-ahaziri ya nke ọma aka hacked Anaconda isiokwu) na-agbasa na WordPress 2.1, a kpaliri m ịnweta isiokwu ọhụrụ ma na-aga ngwa ngwa.
Ikekwe, nke kasị njọ (ma ọ bụ kacha mma) ribbing m were bụ site na ịde blọgụ pro John Chow, onye wepụtara oge na nke ya ịkpa ego ịbịakwute blog ma nye m oge siri ike. Daalụ John! M chịrị ọchị ọchị.
Obi adịla m mma banyere blọgụ n'abalị a. Echere m na m ga-amalite na-esote nnukwu craze maka Web 3.0… ihere glows. Afọ dị ezigbo mma na afọ ole na ole gara aga na afọ ole na ole gara aga bụ ezigbo ngosipụta Web 2.0. Na ihere ìhè ịbụ niile craze na ọhụrụ LCD na HDTV tent (ị ga-eme ihe na-ahịa n'ebe ahụ), enweghị m obi abụọ ọ bụla na ọ bụ ọzọ nnukwu ihe na weebụ.
Nụ ebe a, ndị be anyị! M na-ewetara gị ya na WordPress Kubrick Blue Ambient Glow isiokwu. Naanị m dochiri ihe oyiyi niile, tinyekwuo di na nwunye, ma gbanye ụfọdụ koodu ahụ na nkụnye eji isi mee ka ị hapụ ụlọ maka mmanya m gbakwunyere. Ekwesịrị m ime mgbanwe ụfọdụ CSS. Elere m saịtị ahụ anya na IE7, Firefox 2 (Mac na PC)… dị ezigbo mma. Ọ bụrụ na ọ dịghị mma na IE6… uh, gaa budata ihe nchọgharị ka ọhụrụ! Ha ka nwere efe!
M ka na-alụ ọgụ na plugins di na nwunye 'na-ekwu' na ha dị 2.1 ma ha mechiri saịtị ahụ. Aga m aga n'ihu tweak ma mepee saịtị ahụ ka ọ dị ebube. Nwee ndidi!
Ọ bụrụ na i wepu obosara: 100%; site na #menubar nke kwesiri idozi nsogbu mpiputa uzo.
Jenụwarị 26, 2007 na 6:25 PM
Daalụ, Ade! Ejim gi ugwo nri ehihie.
N'ileghachi anya nke ọma Doug, enwere m obi ụtọ! 🙂
Jenụwarị 26, 2007 na 6:28 PM
Jenụwarị 26, 2007 na 3:23 PM
Na-amasị m nke a anya nnọọ mma! Ọ dị ka m nwere ike ịchọta ihe na saịtị ahụ ngwa ngwa (site na naanị ihe anya-balling).
BTW, ị ghọtara na ị na-agbanye Philips TVs ugbu a (site na Ad-sense) 🙂 Na nke mbụ metụtara isiokwu bụ "Jet Blue sued by a Muslim pilot" LOL. Echere m na "Blue" triggered na yiri isiokwu…?
Ahụrụ m nke ahụ! Dị ihe ọchị.
Jenụwarị 26, 2007 na 6:39 PM
Na-ele anya nke ọma, Doug!
BTW, kedu threaded-comment ngwa mgbakwunye ị na-eji?
Jenụwarị 26, 2007 na 6:56 PM
Daalụ, Sterling. M na-eji Brian si Threaded Comments. Ọ dịghị oke njọ. Achọrọ m ịwụnye dị iche 'denye aha na nkwupụta' ngwa mgbakwunye na-arụ ọrụ na ya… na m ga-gbanwee na -elele ịdenye aha ụdị.
Enwere m ike ịme otu ihe na nke ahụ tinye igbe nlele iji chekwaa ozi ahụ na kuki.
Jenụwarị 26, 2007 na 6:55 PM
Kedu ihe ị chere nchapụta ihu igwe?
A ga-agbaji ihe nlere m.
Ahụrụ m gradient nkụnye eji isi mee na a-acha anụnụ anụnụ ókè….
mmmhh .. Blue…. acha ọcha…. colts… Echere m na m na-ahụ ụkpụrụ.
Jenụwarị 26, 2007 na 6:58 PM
Ọ bụghị n’ezie a-acha anụnụ anụnụ ókè, ọ bụ a feathered utịp ke graphic ka ọ dị ka ihe na-akpata ìhè. Ọ dị ntakịrị.
Jenụwarị 28, 2007 na 10:17 PM
Egosipụta… Echiche… Ma gịnị banyere ndị a ma ama “Gbanyụọ onyinyo”? Ọ bụ nke malitere ya niile!
Echetara m okwu onye mmadụ mere na kọleji; “Ọ bụrụ na m hụ onyinyo ọzọ, m ga-eleda anya.” Mgbe ụfọdụ, n’ime ime abalị, ana m eche ma ọ ka na-arịa ọrịa.
Jenụwarị 28, 2007 na 11:03 PM
Echefuru m 'ol dobe onyinyo! Nke ahụ malitere ya, ọ bụghị ya?!